/blog/gallery/Otu esi choputa ndi nwere uzo uzo di na 12 Steps
Ihe na 04 / 23 / 2019 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
Ihe banyere Steroid Powder
1. Ntinye na steroid akpụkpọ anụ
2. Otu esi choputa steroids swiwia na ntinye 11
Nzọụkwụ 1: Na-achọpụta ndepụta nke ndị ruru eru maka ndị na-emepụta steroid
Nzọụkwụ 2: Nyochaa ọrụ ntanetị nke ndị na-ere ahịa
Nzọụkwụ 3: Chọọnụ maka ozi ndị ọzọ gbasara sistemi na-arụ ọrụ na steroid site na ịjụ ajụjụ ma ọ bụ na-eme nyocha ajụjụ onwe onye
Nzọụkwụ 4: Nnyocha na ihe ndị steroid ịzụta snoozị pụrụ iche
Nzọụkwụ 5: Nyochaa nzaghachi nke ndị ọrụ nlekọta ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ
Nzọụkwụ 6: Chọọ nyocha, nlele anya na nzaghachi ndị ahịa site na ịntanetị
Nzọụkwụ 7: Tụlee ọnụahịa nke steroid powders
Nzọụkwụ 8: Nkwado akwụkwọ
Nzọụkwụ 9: Usoro nzipu na ngwugwu
Nzọụkwụ 10: Nọmba nlekota
Nzọụkwụ 11: Usoro ịkwụ ụgwọ
Nzọụkwụ 12: Lelee nkọwa ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ
Inkwụsị na steroids ntụ ntụ ngwaahịa
Steroids ntụ ntụ snoo bụ ndị na-emepụta ihe ma ọ bụ ndị na-ere ahịa ndị na-ere ụdị ntụpọ dị iche iche nke steroid gị gụnyere ọnụ, injectables na ụdị ndị ọzọ, ya bụ, Akwụkwọ ma ọ bụ sachets. E nwere ọtụtụ puku ụlọ ọrụ ọgwụ na ụlọ ndị dị n'okpuru ala na-ere ngwaahịa ma na-ere ntụ ọka steroid na ntanetị.
O doro anya na taa ọtụtụ ndị na-eji steroid karịa mgbe ọ bụla ọzọ. Ka a sịkwa ihe mere ndị na-ahụ maka steroid na-achọ iji nye ha ka ha kwekọọ n'ogo dị elu. Na mbụ, ịhọrọ otu abụghị ezigbo ọrụ n'ihi na ha abụghị ọtụtụ, mana n'oge a, ị kwesiri ịdị na-atụ egwu mgbe ị na-ebu otu.
Ndị na-edozi akpụkpọ anụ ndị ị na-ahọrọ nwere mmetụta dị irè ma ma ọ bụ na ị gaghị emezu ihe mgbaru ọsọ ị setịpụrụ. Ịhọrọ onye na-ezigara ezighi ezi, ma ị nwere ike ịkwụsị ịla nnukwu ego na oge.
M ga-ekwu na iburu onye na-azụ ihe ziri ezi bụ akụkụ dị oké mkpa ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịzụta steroid. Nke ahụ bụ n'ihi na ọ na-eme ka o doo anya na onye ọrụ ịzọrọ ịhọrọ nwere ike ịnye oge, na nrube isi nke ọma gị na nke kachasị mkpa na ọnụahịa dị mma.
Otu esi choputa steroids swiwia na ntinye 12
Na eziokwu, ịhọrọ nke kacha mma steroid ntụ ntụ skela ahụ na-ewe oge na a bit mgbagwoju anya. Ọtụtụ ndị kwụsịrị tupu ị mụta nkà ahụ wee kwụsị idozi maka obere. Taa, anyị ga-abanye n'ime isi ihe na ngwaọrụ iji mee ka ndị ahịa mara mma, jiri ha tụnyere ibe ha ma na njedebe họrọ ọkachamara kachasị mma ị nwere ike ịtụkwasị obi.
Nzọụkwụ 1: Ịchọta ndepụta nke ndị nwere ike ịzụta ihe maka steroids powder
Nzọụkwụ mbụ na-etinye ala ndepụta nke nwere ike steroid ntụ ntụ suppliers. Kedu ka ị ga esi amata ezigbo ndị na-ebu ngwá ahịa? E nwere ọtụtụ ebe ịchọta ndị na-ebubata ihe na steroid. Dịka ọmụmaatụ, enwere ndị dịiche dị iche iche nke ịchọrọ ịchọta echiche site na gụnyere;
Manufacturers- Ị nwere ike ịkpọ ndị nrụpụta steroid ị maara ma rịọ ha ka ha zigara gị ndepụta nke ụlọ ọrụ ị nwere ike ịkpọtụrụ. N'ihi ya, ọ ga - enyere gị aka ịchọta ihe kachasị mma ị nwere ike ịzụ ahịa.
ngosi- Nke a bụ ebe kachasị mfe ị nwere ike inweta ndepụta nke ndị na-ere ahịa n'ihi na ọnụ ọgụgụ buru ibu dị n'ime ha n'otu mpaghara ahụ. Tupu ị gaa na ihe ngosi, hụ na ị na-ele anya na ndepụta nke ndị ngosi na-aga na ijide n'aka na e nwere ndị na-ada n'ime ihe ị chọrọ.
Ndị ndụmọdụ na-azụ ahịa- Ikekwe, ị ga-ahụ ndị otu mba ma ọ bụ ndị mpaghara na-akwado ụlọ ọrụ. Ihe atụ nke ndị dị otú ahụ bụ ụlọ ahịa.
Ahịa ahia- Ọtụtụ mgbe, magazin ndị ahịa na-enye ohere maka mgbasa ozi ndị ọrụ ngwaahịa. Obi dị m ụtọ na e nwere ndị na-ahụ maka ahịa dị iche iche ka ị ghara ịga na-achọ ndepụta nke ndị na-ere ọgwụ steroid na magazin ụlọ.
Google- Nke a bụ ebe dị mma ebe ị ga-esi nweta ndị ahịa na-adabere na ihe ị chọrọ kpọmkwem dị ka ngwaahịa a, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị maara kpọmkwem steroid ị chọrọ, ịnwere ike ịchọ "ndị na-ebute steroid x."
Site na nke a, ịnwere ike ịchọta ma jiri ndepụta dị mkpirikpi pụta. I kwesiri ichoputa ndi nke kwesiri ileghari omimi nke oma ma tinyekwuo igbe dika ihe ndi choro gi. Site na onye ọ bụla na-ele anya na ndị niile na-enye gị ọrụ ị ga - eju anya na nhọrọ ole na ole ị ga - ahapụ.
Kedu otu nke a ga - esi nyere aka n'ịchọpụta onye ziri ezi ziri ezi? Ọ na-enyere aka belata asọmpi, ma ugbu a, ị nwere ohere dị elu nke ịchọta ihe kachasị ndị na-edozi soda. Ọzọkwa, ime mkpebi ikpeazụ nwere ike ọ gaghị adị mkpa ka ị gbasi mbọ ike ugbu a.
Ntugharị gụnyere itinye nyocha na nyochaa onye na-azụ ahịa na-arụ ọrụ n'oge na-aga ịchọta ihe na-eme ma belata ihe ize ndụ ọ bụla. Site n'ime nke a, ị nwere ike ịhọrọ ndị na-elekọta ọrụ ndị magburu onwe ha ma kpochapụ ndị na-adịghị arụ ọrụ.
Tụkwasị na nke a, ịnwere ike ikwenye na onye nwere ike ịbịaru sistem enweghi usoro ọdịda dị egwu nke nwere ike imetụta àgwà ngwaahịa ahụ. O nwekwara ike inyere aka ịghọta onye ọ bụla na-eweta ihe nrụpụta na adịghị ike tupu ị kpebie onye ị ga-edozi.
Inyocha ọrụ ndị ọrụ ahụ anaghị akwụsị mgbe ị bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ahụ; ọ dị oké egwu maka mmepe azụmahịa. Dị ka nke a, ọ na - enye gị ohere ilekwasị anya na ihe ndị dị oké mkpa na-ere ngwaahịa nke ị na - eche na ọ bụ ihe ize ndụ mgbe ị na - achọpụta ndị na - ebute ngwaahịa abụọ. Onye na-azụ ahịa nke kwadoro ọrụ siri ike ga-enye gị ọrụ dị mma na uru ị na-azụ ahịa gị. Ndị na-eme ihe na-adịghị mma nwere ike ịkwụsị inye gị isi ọwụwa.
Ị nwere ike ịchọrọ ịmatakwu nkọwa gbasara ndị na-achọ ịbịakarị banyere ụfọdụ ihe ọmụma. N'okwu a, ịnwere ike ịme ajụjụ nyocha onwe onye ebe ndị na-eweta ọrụ nwere ike ịza ajụjụ ọ bụla ị nwere. Site na nke a, ị nwere ike ịkọwa ọdịiche arụmọrụ yana ịmara otú onye na-azụ ahịa si aghọta ọrụ ya.
Ị nwere ike ịhọrọ itinye ma ajụjụ mechibidoro ma mechie ya ka ndị na-azụ ahịa kọwaara gị otu esi arụ ọrụ na mpaghara dị iche iche. Nke ahụ ga-enyere aka ikwalite ikwesị ntụkwasị obi ebe ọ bụ na ha agaghị aza ee na ajụjụ niile.
Nzọụkwụ 4: Nyochaa ihe steroids ezinzuzu uzuzu di iche iche.
Ọ bụghị onye ọ bụla soplaja bụ jaak nke niile trades. Ụfọdụ na-enye ụbụrụ ndị na-eto eto ka ndị ọzọ na-emepụta ihe ndị a rụchara. Ndị ọzọ nwere ike inye ụfọdụ steroid ma ndị ọzọ agaghị. O nwere ike iyi ihe doro anya, mana ihe ị ga-echebara echiche bụ ịmata mkpa gị. Ịkwesịrị ịchọta kpọmkwem mgbe ị na-achọpụta ihe ịchọrọ ịzụta.
Ị nwere ike ịchọpụta ugbu a nke onye na-ebu ngwaahịa nwere ike iji gboo mkpa gị. Dịka ọmụmaatụ, naanị n'ihi na onye na-ere ahịa na-ere okokụre Deca apụtaghị na ha nwere ike inye gị ya Deca raw ntụ ntụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ngwaahịa, ị nwere ike ịhọrọ ịnweta ọtụtụ ndị na-eweta ọrụ nke nwere ike ịnye gị niile steroid ị chọrọ.
Nzọụkwụ 5: Nyochaa nzaghachi nke ndị ọrụ nlekọta ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ọrụ ndị ahịa dị iche site na onye na-eweta sistemụ ọzọ, mana àgwà ndị dị mkpa gụnyere ịza ajụjụ nile, inye nsogbu maka nsogbu, inye ngwangwa ngwa ngwa na ịnweta ọrụ ahịa.
Ịchọta ọrụ ahịa ndị ọrụ ndị ọrụ ahụ dị mkpa. Ọ bụ karịa mmanụ na engine. Mgbe ọ dị n'ebe ahụ, engine ga-agbanye ọsọ na-agba ọsọ mgbe ị nwere ike inwe ahụmahụ na-adịghị mma na-enweghị ya. Ọ bụrụ na onye na-azụ ahịa nwere nzaghachi nchịkwa, mgbe ahụ ọ naghị eche banyere azụmahịa ya ma soro ya rụọ ọrụ nwere ike ọ gaghị adị mfe.
Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ị ga-achọ ịkpọtụrụ ha n'oge awa ahụ, ị ​​ghaghị itinye aka na nke a. Gaa maka onye na-ebu sopụ nke onye na-elekọta ndị ahịa anaghị ewe oge iji zaghachi na onye dị 24 / 7. N'ụzọ dị otú a, ị ga-anọ n'otu akwụkwọ ahụ na-ekwu banyere mkpa azụmahịa gị. Site n'ichebara nchegbu gị na ime ka ị mara ihe dị gị mkpa; a ga-ewulite mmekorita nke ọganihu.
Tụkwasị na nke a, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ nwere nlekọta ndị ahịa na-atụkwasị obi, ngwa ngwa, ma na-anabata ha, enwere ohere dị ukwuu na ụlọ ọrụ ahụ bụ legit. Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ọrụ ndị ọrụ ahịa nke otu ụlọ ọrụ dị njọ, gaa n'ihu na onyeikpe site na ha si emeso gị dịka onye ahịa.
Nzọụkwụ 6: Chọọ nyocha, nlele anya na nzaghachi ndị ahịa site na ịntanetị.
Ịlele aha nke ndị ọrụ dị iche iche bụ otu n'ime usoro ndị dị mkpa nke nwere ike ịkwa ụta mgbe ị na-atụgharị. A na-enweta ya site na iji nzaghachi ndị ahịa nyere online. Echiche nke ndị ahịa na-agwa gị ma afọ ojuju na ọrụ ahụ ma ọ bụ.
Ịchọ nyocha na nlele anya maka ọrụ ndị na-azụ ahịa ga-enyere gị aka ịghọta nghota nke ihe ị ga-atụ anya ma ọ bụrụ na ị kpebie imekọrịta ha. Ị nwekwara ike ịma oge ole ha na-ewe iji merie ndị steroid na ọ bụrụ na ha na-enye ọrụ ndị magburu onwe ha mgbe ha risịrị.
Otu ụlọ ọrụ nwere aha ọma dị ka ọ ga-enwe ụdị ngwaahịa dị mma yana nkà maka otu esi emeso ndị ahịa ha. Tụkwasị na nke a, ọ bụrụ na ọtụtụ nyocha na mkpesa na-adịghị mma, mgbe ahụ, ụlọ ọrụ a abụghị legit. Ihe ole na ole na-adịghị mma dị njọ; ihe ị ga-enyocha bụ otú onye na-azụ ahịa si mesoo esemokwu ahụ.
Mgbe a bịara n'ịkwụ ụgwọ, onye kachasị dị ala nwere ike ibute ụzọ kachasị mkpa. Otú ọ dị, ihe mgbaru ọsọ gị bụ iji nweta ngwaahịa dị elu nke dị oke mma ma ọ bụghị ọnụ ala ndị na-adịghị ala ala nke nwere ike ọ gaghị enye uru ọbụla. Ọnụ ego dị oke ọnụ ahịa nwere ike ịbụ onye ọnụ na ụlọ ọrụ nwere ike ịpụ n'ebe ahụ iji rafuo gị.
Ọ bụrụ na i nwere nkwenye na ndị steroid nke dị elu na ụgwọ a dị ntakịrị karịa nhọrọ kachasị ọnụ ala ị nwetara, gaa n'ihu ma zụrụ ya ma ọ bụrụ na o kwere omume. Ọnụahịa ekwesịghị ịbụ oke elu; o kwesiri itinye aka na mmefu ego gi.
Ndi ekere ke mme uwetn̄kpọ edinam emi ekeme ndinam ufan mbufo ye nsanisọn̄? Ọ bụ iwu bụ isi na onye ọ bụla na-ebu ígwè kwesịrị ịnọgide na-edebe ihe ndekọ kwesịrị ekwesị ma wezụga na ọ na-echebe gị na azụmahịa gị. Na-enyocha ma onye na-azụ ahịa nwere ikikere ziri ezi na-enyere gị aka ịma na ị na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ iwu.
Ọzọkwa, ọ na-enyere aka ịmepụta nkọwa zuru ezu banyere otú onye na-azụ ahịa si arụ ọrụ. Ọ bụ ihe dị mma ị rịọ maka ndị nwere ike ịnye gị akụkọ nyocha ụlọ, dị ka HPLC, NMR, COA (Asambodo Nyocha), na asambodo dị ka GMP (Ezi Ọrụ Ntupụta Ọrụ). Akwụkwọ ndị a na-enyere gị aka ịmata na a na-arụpụta steroid ndị e mepụta ma na-achịkwa ụkpụrụ omume.
Mgbe ụfọdụ ị nwere ike ọ gaghị enwe oge iji gaa ụlọ ọrụ mmepụta ihe iji nyochaa ikike mmepụta nke otu onye na-azụ ahịa. Ọ bụrụ otú ahụ, ịnwere ike ịjụ ha ka ha zigara gị akwụkwọ nke asambodo ha. Inwe ihe doro anya na onye na-azụ ahịa na-akwado iwu bụ ihe dị mkpa nke ndị na-ebu ezigbo mma.
Ihe eji etinye ihe gị, na usoro nnyefe na-ekpebi ma ị ga-enweta ya n'otu akụkụ. Ịnweta ngwaahịa na-ezighị ezi nke chọrọ replacements n'oge niile nwere ike ịdị ngwa ma na-ewe oge. Ọ dị mma ịchọta na ihe ndabere na ihe ntanye oge na-aga ogologo oge n'ịkwalite ọganihu azụmahịa gị.
Tupu ị ahọpụta onye na-azụ soda, ị ga-eleba anya na oge ha na oge nkwụsị. Onye na-azụta ihe ziri ezi ga-ewe ihe dịkarịrị awa 24 iji zigara ngwugwu gị ma hụ na ọ ga-abịarute ebe ị na-aga n'ime oge kachasị anya.
Ịnweta steroid nke nwere ike ịzụta uzuzu ga-ekwe ka ị jikwaa ngwaahịa gị ma tinye atụmanya maka ndị ahịa gị banyere nnyefe na ichere oge.
Ezigbo sistemi gị nwere ike ọ gaghị emeri ihe ngosi n'inye onyinye mara mma nke kacha mma, ma o kwesịrị ịdị ike iji kpuchie ihe ndị ahụ site n'ụdị mmebi ọ bụla.
Ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-eji mbupu efu n'efu ma ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ dị ka nha, nfe nke njem na arọ. Nweta ozi niile dị mkpa banyere ego ole ọ ga-efu gị iji zere ego ọ bụla zoro ezo.
Nọmba ọnụọgụgụ bụ koodu enyere mgbe ị na-eme ka iwu nyere gị aka ịgbaso ngwugwu gị online site na oge e zigara ya ozugbo o ruru adreesị mbupu gị. Ọzọkwa, ị nwere ike ịlele ozi agha na ihe ndị dị ugbu a.
Onye na-azụ ahịa nke na-enye gị ozi nlekota na-eme ka ị nwekwuo obi ike na ngwugwu ahụ ga-abịakwute gị. Ndị ọzọ na-aga ebe ị na-ezitere gị foto ntanetị tupu emee ya. Ọ na-echebekwa gị site na ọnwụ ma ọ bụrụ na ịnataghị ya n'ihi ọnwụ ma ọ bụ mmebi. Ịzụ ahịa na onye soplata na-eme ka ị nwee ahụmahụ zuru oke na ịzụ ahịa.
Ọ dị oké mkpa na ị na-atụle ụzọ nkwụnye ụgwọ nke onye ịchọrọ ịchọtara bụ inye. Ụgwọ ịkwụ ụgwọ a ga-atụkwasị anya ma dị na ọnọdụ gị.
Taa, bitcoin na ego dijitalụ na-enwetawanye ewu ewu. Ha na-enweta ọtụtụ uru ebe ọ bụ na ha na-ekwe ka ị kwụọ ụgwọ n'enweghị aha. Ebe ọ bụ na ha anaghị edekọ aha na-akpaghị aka, ị ga-enweta obi ụtọ ọzọ.
Ụfọdụ ụzọ ịkwụ ụgwọ dị ka ego na-etinye ihe ize ndụ karịa ndị ọzọ ebe ndị ọzọ na-ewepụta oge iji nweta mmelite. Nke a nwere ike imetụta azụmahịa gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnyefe ngwaahịa a n'otu ụbọchị ahụ. Ọ bụ ọrụ nke ndị na-ebu ọrụ iji nye ego nkwụnye ego nke nwere obere ihe ize ndụ nke ịkwụ ụgwọ na ịghọ aghụghọ data.
Tụkwasị na nke a, ndị ọzọ dị ka kaadị akwụmụgwọ na-atụkarị ụgwọ ọrụ. Ị nwere ike ịhọrọ ụzọ nkwụnye ụgwọ nke nwere ọnụ ahịa ego ole na ole. Ọ bụ maka ihe ndị dị otú ahụ na ị ga-ahọrọ onye na-ebu snoo na-enye usoro ịkwụ ụgwọ nke kachasị gị mma.
Gbaa mbọ hụ na ị kwadoro maka onye na-azụ ahịa na-enye ụdị nkwụnye ụgwọ dị iche iche dị ka Western Union, MoneyGram, Bitcoin, Nnyefe ego, na nke ọzọ iji nye gị ohere ịhọrọ ihe na-arụ ọrụ maka gị.
Ebe obibi ndị na-azụ ahịa nwere ọtụtụ ozi bara uru ị nwere ike iji mee mkpebi ikpeazụ. Enweghị ike ịchọta ya ma ọ bụrụ na ị ga - enwe ike ịchọta ya gbasara anyị peeji nke. Lelee maka ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ were, ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ ahụ na ọnụahịa ego ahụ.
Onye na-ebu ihe na-ezighị ezi pụtara mgbe niile na ozi. Nke ahụ bụ ọkọlọtọ ọbara ọbara nke kwesịrị ime ka ị kwụsịtụ tupu ị kpebie ịkụ bọtịnụ ịzụta.
Ọ bụ ezie na usoro nhazi nke ịzụta uzo steroid nwere ike iyi ogologo oge, ịgbaso usoro nzọụkwụ dị mfe nwere ike ịchekwa oge gị. Inwe ụzọ mkpirisi ma ọ bụ nkụdapụ nwere ike ịba gị ụba n'ihe gbasara ịhazi ụkpụrụ iwu, ịmepụta aha dị mma maka steroid dị mma na n'ịbawanye mkpa ndị ahịa.
Ịtụle otu nlele nyocha nwere ike ịdakwasị gị n'ime nhazi maka obere ịme soplaya. Dị ka ndị dị otú ahụ, enwere ike ịdị na-arụ ọrụ nchịkwa, ngwaahịa ndị dị ala, akwụkwọ nchịkọta, nkwụsị nke ọkọnọ, ntụpọ, wdg. Nzube achụmnta ego na-enweta mgbe ụlọ ọrụ gị na-elekwasị anya n'àgwà ọma, ọnụahịa, na nhazi oge. Ọ bụghị naanị na ọ ga-eme ka ọ hụ na ị na-azụ ahịa ma ọ na-enye ndị ọrụ njedebe obi ike na steroid ndị ị na-ere.
Ịhọrọ ezigbo soplaị ahụ, ga-enye gị ahụmịhe azụmaahịa na-enweghị nchekasị ma nyere gị aka ịnweta ọgwụ ndị kachasị mma.
Nhọrọ ndị ntinye, Ịzụta usoro ihe mma, PT Publications, 1998, 1-154 peeji nke
E-HR: -Iso Intranets Iji Meziwanye Ọdịmma nke Ndị Gị, peeji nke 185
Ihe ndi nkesa, Dokita Aditva Verma
Boldenone Undecylenate: 8 Mgbasaozi Mmetụta Ị ga - achọ izere 2019 Otu esi eme ka testosterone enanthate homebrew na nzọụkwụ 6